Nkọwa:Led Post Top Lantern,Ebube Ochie Post,Ebube nke kachasị elu
Home > Ngwaahịa > Ebube Ogologo > Uhie Post elu > Agba Mkpụrụ 30W Ebube Post Top Lantern Fixtures
Ihe Nlereanya.: BB-LD-30W-AR-B
Akwụkwọ ETL DLC kwadoro akwụkwọ Post Top Lantern ọ dị mfe ịwụnye bọtịnụ ọkụ ma gbanwee oghere maka ogwe aka nke ogwe aka na ntanye kachasị. Anyị 30w Ebube Ochie Post nkwụnye osisi na-adaba adaba na 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch pole. E wezụga nke a, Led Post Top Fixtures nkwado AC100-277V nnukwu ọkụ eletrik dị ugbu a, jiri ya tụnyere 100W nke na-agbanye ọkụ bulbs, chekwaa ruo pasent 90 nke eletrik eletrik.
Nke a mere ka e jiri IP65 mmiri mee ihe maka ọnọdụ ihu igwe niile, ezigbo ụlọ ọkụ na-egbuke egbuke na-enyefe ihe ọkụkụ dị egwu, na-eme ka ndụ dị ndụ na-egbochi mmebi, nkwụsị ụgwọ dị ala, nnukwu ihe ndị dị n'èzí dị ka okporo ụzọ obodo, okporo ụzọ, ụlọ akwụkwọ, ubi, ogige ụgbọala na-adọba ụgbọala, ogige ntụrụndụ, wdg.
30w anyị na-ebute ìhè ebe a ga-enwe oghere 120 °, 130lm / w SMD 3030 Diana ibe, mkpokọta 3900 lumen, na-arụpụta ruo 130 lumen kwa watt, jiri ya tụnyere ndị ọzọ nnukwu mgbapụta sodium oriọna, nnukwu ọkụ oriọna, ọ ka mma itinye n'ọrụ na ịdị n'otu, nwere ndụ 50,000 nke ndụ, ịdị mma gburugburu ebe obibi na ike dị mma, chekwaa ego gị.
50W na-eduzi ndị na-enye ìhè Kpọtụrụ ugbu a
50W wee kpoo oghere ebe ugwu Kpọtụrụ ugbu a
ETL DLC 50W mere ihe nkwụsị elu Kpọtụrụ ugbu a
30W DLC na-eduzi ihe mkpuchi ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
ETL DLC Ugboro oku ozi TOP LIGHT 30W Kpọtụrụ ugbu a
SMD3030 LED 30W mere ihe nkwụnye ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
30W Igodo Nkeji edemede Mee N'onwe Gị Kpọtụrụ ugbu a
Ebube 100W LED Post Top Mpaghara ìhè Kpọtụrụ ugbu a
Led Post Top Lantern Ebube Ochie Post Ebube nke kachasị elu Led Post Top Light Led Post Top Lamp Anyanwụ Led Post Top Light 25W 25W Post Top nyere Led Post Top Mpaghara 25W